Unokufumana njani ukusuka eLondon, e-UK naseParis ukuya eCaen
Unokufumana njani ukusuka eLondon, e-UK naseParis ukuya eKenen eNormandy
by UMary Anne Evans
Ukuhamba ukuya eCaen eNormandy
Unokufumana njani ukusuka eParis ukuya eKenen eNormandy
Funda kabanzi malunga neParis neCaen .
I-Caen yaseNormandy yaqhathaniswa ibhobho kwiMfazwe Yehlabathi II. Kwakhona enye yeyona nto ihamba phambili ye-War Museums eFransi, iSikhumbuzo de Caen . Namhlanje inezo ndawo eziphawulekayo ukuzibona kwaye zijikeleze umzi owaziwayo ngokubanzi kwimibutho yakhe noWilliam uMnqobi .
Iwebsite yeKhenketho yeKaen
EParis ukuya eCaen ngeTeve
Izitimela ukuya eCaen ziphuma eParis Gare Saint Lazare (13 rue Amsterdam, eParis 8) yonke imihla.
Imizila yeMetro ukuya naseGare Saint Lazare
Ligne 3: Porte de Levallois-Becon ukuya eGallieni
Ligne 12: Porte de la Chapelle kuMairie d'Issy
Ligne 13: Saint-Denis-Universite eCatillon-Montrouge
Ligne 14: Saint Lazare kwi-Bibliotheque Francois Mitterand
Kuba iibhasi zibona imephu yaseParis
Ukuvakalisa izitimela kwisikhululo seCaen
I-Caen isecaleni lesantya esivela eParis ukuya eCherbourg. Izithuthi ezithe ngqo ziquka
I-Paris ukuya eCaen esiteshini kwi-1hrs iimitha ezingama-46
I-Cherbourg ukuya eCaen esiteshini kwi-1 hr 12 emitha
Rouen ukuya eCaen esiteshini kwi-1hr 37 mins
I-TER ephakamileyo yee-TER kunye noThutho oluhamba phambili kunye noshintsho olulodwa
Ukusuka eLille (edibanisa ne-Eurostar) kwisikhululo seCaen kwi-3 hrs 41 amaminithi.
Ukusuka kwisikhululo seCharles de Gaulle ukuya kwisikhululo seCaen nge-2 ii-06 zeeyure.
Ukusuka eRennes, eBrittany ukuya kwisikhululo seCaen ngo-3hrs
Jonga iinkonzo ezinkulu ze- TER kwiwebhusayithi ye-TER .
Isiteshi seCaen se -15 pl de la Gare, malunga neekhilomitha ukuhamba ngasezantsi kweziko.
Uhambo lokuThusha uhambo oluya eFrance
Ukususela encwadini yase-US nge-Yurophu yaseYurophu
Ukususela kwi-UK incwadi kunye neeRagages sncf (eyayisakuba yi-Rail Europe UK)
Ukuya eCaen ngeFerry
Portsmouth, UK ukuya Caen
I-Brittany Ferries isebenza ngenkonzo enqabileyo kakhulu eCaen yasePortsmouth. Ukugqithwa kuthatha iiyure ezingama-6 ngelilanga kunye neeyure ezingama-7 ngobusuku. Iimithayimthebhile zonyaka zisebenza.
Isibhedlele esiqingqiweyo e-Ouistreham sinesiqingatha ezili-15 kumntla weCenen.
Ukusuka eCaen kukho ukufikelela ngokuthe ngqo kwi-A13 ukuya eRouen (67 iekhilomitha / iikhilomitha ezili-108)
Kukho ukufikelela ngokuthe ngqo kwi-A84 ukuya kwiLe Mont St Michel kunye neBrittany, kunye nezantsi ukuya kwi-N158 ukuya eLe Mans.
Incwadi ngqo kwiBrittany Ferries
Okunye malunga neFerry Travel ukusuka e-UK ukuya eFransi
Ukuya eCaen ngeenqwelo
I-Airport yeCaen iphela ngaphandle kweCarpiquet, i-7km entshonalanga kweso sixeko. Iinqwelo-moya ezincinci zanamhlanje kunye neenqwelo zeenqwelo ze-UK kunye neenqwelo zeenqwelo ezivela kwiindawo ezininzi eziphambili zaseFransi kunye namanye amazwe aseYurophu. Umphathiswa omkhulu yi- Air France kunye ne-subsidiary yaseBrit Air .
Hop! isebenza ngeenqwelo. Ibhasi ye-shuttle yemihla ngemihla isebenza kwi-Tour-la-Roi ukuma endaweni yaseContonne.
Ukuya eCaen ngemoto
I-Paris ukuya eCaen ingama-234 kms (145 miles) ithatha ii-2 iiyure ezingama-30 ngokuxhomekeka kwisantya sakho. Kukho ii-toll kwii-autoroutes.
Ukuya eCaen ngebhasi
I-Eurolines iphuma eParis Gallieni Porte Bagnolet kathathu ngeveki ngoLwesibili, ngoLwesine nangomgqibelo. Uhambo oluya eCaen luthatha iiyure ezine.
Ukufumana ulwazi malunga nokuqasha imoto phantsi kwesikimu sokuqashisa okuyiyona ndlela eyona ndlela yonyango yokuqesha imoto ukuba useFransi iintsuku ezingaphezu kwe-17, zama i- Renault Eurodrive Ukubuyisela Ukubuyisela.
I-Eurostar phakathi kweLondon, eParis naseLille
Ngebhasi / umqeqeshi i- Eurolines inikezela ngeenkonzo ezincinci ukusuka eLondon, eGillingham, eCanterbury, Folkestone naseDover ukuya eParis iCharles de Gaulle Airport kunye naseParis Gallieni. Abaqeqeshi abathandathu ngosuku; 2 ngobusuku; ixesha lokuhamba iiyure ezingama-7. Ukuma kwe-Eurolines kwi-Station ye-Paris Gallieni Coach Station, 28 ave du Jikelele weGaulle, nje kwisikhululo sesithili saseGaleni kufuphi ne-Porte de Bagnolet (i-Metro line 3, i-stop stop).
I-website ye-Euroline yokuhamba ngesiFrentshi
I-QUIBUS isebenza phakathi kweLondon kunye neLille naseLondon naseParis. I-IDBus isuka eLille iya e-Amsterdam naseBrussels.
Ngemoto: Thatha isikebhe ngaphesheya kweSingesi
Okunye malunga noWilliam uMnqobi kunye neNormandy
Ngo-2016 wabona umnyaka we-950 we-Battle of Hastings ngo-1066 xa uWilliam ebetha u-Edward i-Confesesa waza wawayisa iNgilandi. I-Caen inikeza ukuxhuma okulungileyo kumntu onomdla wokubona okungakumbi ngeNorman bastard King.
Falaise Castle apho uWilliam wazalelwa khona
UWilliam kunye nobomi bakhe kwimifanekiso
Isikhokelo kwiNormandy ephakathi
Isikhokelo Sokuthukuthela e-Loire Valley
Unokufumana njani ukusuka eLondon, e-UK naseParis ukuya ePerpignan
Iindawo ezithandekayo zokudibanisa eFransi
Iinqwelo zeeNtengo ezingabonakaliyo kunye namagumbi athile eFrance
Usuku lomama eFransi
IiNkundla zokutya kwi-Las Vegas Strip - Eyona nto ibhetele, i-Cheap Fast
Amabala amaninzi ukujonga i-Cherry Tree eWashington, DC
Corner Brook, eNewfoundland
Izinto ezili-10 ezingafanele zenzeke eFinland
I-Bike ehamba phambili kwiSt. Louis
IHartford Riverfest ye-4 yoJulayi
AmaKhanadi amaFane esebenza
Iindawo ezininzi zeParadesi zokuThatha umhlalaphantsi
I-Biography ye-Houston-ozelwe nguBeyonce Knowles-Carter
ISpandau Citadel eBerlin
I-Honeymoon Destinations e-California kufuphi naseLos Angeles
Izipho kunye neMikhumbuzo yaseJamani
Iimpawu ze-Alcatraz ezinokumangalisa